Umhla My Pet » 5 Ukuthandana inyala Ufanele Yaphula kwaye ndibaleke
5 Ukuthandana inyala Ufanele Yaphula kwaye ndibaleke
ukubuyekezwa: Mar. 28 2020 | 2 min ukufunda
Yini na ukuba umntu abe zixinge phantsi inyala ukuthandana? Amaninzi aba inyala uyeke abantu ukuza ngapha komntu elithethwe ngexesha elifanelekileyo; kunye ukunyuka kweqondo loo umane ukuwahlula uqhawulo, oku nje unpardonable. Ngoko ke, into yokuqala ofanele uyenze ngaphambi kokuba aphume ngomhla waphula ezi inyala. Nazi ezinye inyala ukuthandana kufuneka ikhulule.
1 Oh! Ukuba umntu ukhangela okulungileyo, kodwa mfutshane kakhulu kunam.
Yintoni ukuphakama? njani ulwalamano zingahambi ngenxa nje indoda mfutshane umfazi? Endaweni ziqiniseka umphakamo lomntu, kufuneka sinikele ingqalelo ngakumbi kwimpilo yakhe, umntu, imfundo wit. Kunjalo ungaya iimpawu zangaphandle ezifana ubuhle kuphila (ewe abo amaxesha andwebileyo), kodwa ukwenza izigqibo ezisekelwe ubude yomntu angafanele nje.
2 Ndiya kuze ibe ukuthatha inyathelo.
Le yenye ukuthandana aluvumelekanga umthwalo nkqu ezinye bakrelekrele nabafazi apholileyo. Le ndlela aluvumelekanga okunene ubangelwa intsomi yokuba icebisa amabhinqa akhetha ukuthandana siqinisekile, amadoda anobukroti abo Yiya-getters namadoda betsalwa lula ngabasetyhini kubenza bazive ngamandla, bazithembe yaye ndiye-nokufumana. Oku inkunkuma nje.
Yinto engalunganga ngokupheleleyo ukucinga ukuba onke amadoda ayafana. Zininzi, kwaye ewe abaninzi ngenxa yokoyika eziqatha lusenokungamkelwa akazange acele abafazi; abafazi kusoloko kufuneka athathe inyathelo lokuqala makhe ubabuze okanye ngesondo. le, nokuba, kukha umisela kwinto yokuba amadoda ezinjalo kuba nabebehlalisana ubomi kakhulu okanye (Ukuba ngaba ufuna ukuba kude) amaqabane ukuthandana.
3 Yena becela ukuba ukwahlula uyilwayo; kufuneka abe nentlonelo ngokwenene abafazi.
akukho mfuneko; ngaphandle uyayiphosa ithuba ukubonisa onenkathalo ezonakalisile, ngokuzimisela ukuba ukwahlula amadoda uyilwayo ligqibela ukubonakalisa stinginess ziyinxenye. Hlalani kude madoda.
4 Yinto umhla kwethu nje kuqala; Njani ngesondo?
Abafazi wazihlupha le ukuthandana aluvumelekanga elixeshalibi sicinge ukuba abantu abanakuze babahloniphe abasetyhini abafumana olusondeleyo ngobusuku yokuqala kwaye oko kuze eluthandweni nabo.
Abafazi abo kufuneka sikhumbule ukuba ubudlelwane kakhulu kudla malunga yintlantsi ngephanyazo okanye chemistry. Nje ngokuba ngesondo ngomhla wokuqala, nina musani lula. Sex kuqala-mhla ukuze kulunge sisalathisi yokuba wena neqabane lakho elitsha ukuthandana ukuba gelling kakuhle kunye.
5 Loo mfo kuyinto egudileyo, kodwa ukuba umlingane wam.
Owalela uthi ngokuthandana phakathi nabo badla-waphila mfutshane ngenxa kwizinto ezifana ikhwele, kwesiphazamiso, umkhethe nokuhleba. Ezininzi nazo abasafuni ulwalamano olunjalo njengoko besoyikela ukuba lentlungu ukuze ubomi emsebenzini ngokupheleleyo ngumnqantsa kubo.
Ukulahla aluvumelekanga ngokukhawuleza kangangoko ukuze ufumane iqabane ubomi obufezekileyo naye yakho. Eyona nto intle ulwalamano olunjalo kukuba ababini kuni uya kufumana ukuchitha ixesha elininzi kunye nezinye; unako ukuhamba ndawonye ukuya nokubuya emsebenzini, unokuba sakho semini kunye, athabathe inxaxheba kwi-ofisi GET-togethers njalo. ukuqinisekisa ukuba umahluko yakho yobuqu (xa kukho nawaphi na) aluchaphazeli umsebenzi.
Ungaze uvumele ezi inyala ukuba badlale indima enkulu xa kusenziwa izigqibo malunga nomntu. Ukwenjenjalo kuya kwenza ukuba ulinde ngaphezu iqabane umphefumlo wakho.